Minamato Yousiku Kupesana Nemweya yeNyoka Part 2 | MINYENGETERO MARI
Chitatu, Nyamavhuvhu 4, 2021
musha Pfungwa dzemunamato Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 2
Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 2
19 Tarirai, ndinokupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, uye pamusoro pesimba rose remuvengi; uye hakuna chinhu chingakukuvadzai.
Nhasi tichave tichiita chikamu chekupedzisira cheminamato yedu yehusiku, ine musoro: Minamato yehusiku inopesana nemweya yenyoka chikamu 2. Kana usati waverenga chikamu 1, tinya nemutsa pano nekuti izvo. Midzimu yenyoka iri kubva kuna dhiabhori chaizvo, uye inotumirwa kuuraya nekuparadza vatendi. MaKristu mazhinji akarwiswa nemauto aya anoenda kunzvimbo nenzvimbo kugadzirisa mhinduro asi zvese kuti zviwane izvozvi, nekuti a hwaro dambudziko. Kusvikira mweya wenyoka wakaparadzwa nemoto waMwari, munhu iyeye haasunungurwe.
Asi ndeapi mabasa emidzimu yenyoka? Pazasi pane zvimwe zviitiko ipapo pakati pevamwe:
A). Husume Womweya uye Mukadzi Womweya
B). Kuvhiringidza Mune Basa Rako
C). Kusabereka (Zvese mudumbu mako uye muhupenyu hwako).
E). Kurwara Kunoshamisa (zvinhu zvinofamba mumuviri wako).
F). Rufu Pasinei Nerufu
G). Kuona Nyoka muchiroto
H). Nyoka inoruma muchiroto (Chepfu Pamweya).
Manheru ano minamato ndicho chombo chako chemweya chinopesana nemweya yenyoka. Nemunamato uyu, iwe uchavhuna musoro wenyoka dzose dzinofamba dzakakomberedza zvaunogumira. Ndinokukurudzira kuti unamate manheru ano minamato uine shungu uye ini ndinoona Mwari vachikununura zvachose muzita raJesu.
1. Ini ndinofukidza zvese zviri mukati mangu, zvese zvakandikomberedza, nezvose zviri pandiri zvino neropa raJesu.
2. Iwe nyoka dzemadhimoni, piwa uturu-hwakaderera munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.
3. Iwe nyoka yekusagoneka, kufa, muzita raJesu.
4. Iwe Nyoka nechinyavada yekutambudzika, kufa, muzita raJesu.
5. Nyoka yese nechinyavada, zvakazodzwa kupokana nekwandiri, pukunyuka ufe, muzita raJesu.
6. Wese nyoka yemweya uye chepfu, ibva parurimi rwangu, muzita raJesu.
7. Ini ndinotyora zai rose rakaiswa nenyoka mubazi rega rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
8. Wese wenyoka ne scorpion simba, uchimukira hupenyu hwangu, nyadziswa, muzita raJesu.
9. O Ishe, maseraga ese uye nezvinyavada zvakapihwa kwandiri kuti vatange kuzvirwira, muzita raJesu.
10. Nyoka yese, yakatumirwa kuzondiparadza, dzoka kune watumira kwauri nehasha, muzita raJesu.
11. Chero simba rangu pamweya, rakatemwa nenyoka, ndinogamuchira kubata kwaMwari uye ndinomutswa, muzita raJesu.
12. Iwe nyoka, sunungura kubatwa kwako pasimba rangu rezveMweya, muzita raJesu.
13. Kusvibiswa kwese kwehupenyu hwangu hwemweya uye hutano nenyoka, kunatswa neropa raJesu.
14. Wese wenyoka anoteedzera hutano hwangu, ashungurudzwa uye agadziswe simba, muzita raJesu.
15. Imi mose venyoka, kurutsai kubudirira kwangu, hutano, kuroora, mari nesimba rekunamata iro ramakamedza, muzita rakasimba raIshe wedu Jesu Kristu.
16. ndinotsika pamusoro penyoka dzose nezvinyavada; havagone kundikuvadza, muzita raJesu.
17. Iwe bara rinobva kudenga, uraya nyoka dzese dzerufu, muzita raJesu.
18. Ini ndakagura mweya yega yega-yakasungwa nemweya chero yenyoka, muzita raJesu.
19. Ndinobvisa muchetura uye uturu hwezvinyavada nenyoka kubva munyama yangu, muzita raJesu.
20. Ini ndakazvibvisa pane zvese cobra, nyoka nekunamata kwemadzitateguru, muzita raJesu.
21. Ini ndinotendeuka kunamatwa kwese kwenyoka, uye nekunamatwa kwevamwari vezvikara pamwe nemasimba emweya, moto, mvura, nyika yepasi uye zvisikwa, muzita raJesu.
22. Nyoka dzese nedzinya mweya, ibva kwandiri ikozvino, muzita raJesu.
23. Ini ndinozvisunungura kubva pane yese inorumwa nenyoka uye chepfu, muzita raJesu.
24. Chose chinyavada, chakange chakamisidzana neni, chinogumburwa, muzita raJesu.
25. Nyoka yega yega, yakamiswa pamberi mukufambira mberi kwangu kwemweya, ngaiitwe zvishungu, muzita raJesu.
26. Nyoka dzaSatani, dzakatumirwa kuzorwa neni, gamuchira kupenga, muzita raJesu.
27. Nyoka dzaSatani, dzakatumwa kunwisa mhuri yangu, ngaite mitezo uye yakagochwa, muzita raJesu.
28. Ini ndinotsika pamusoro penyoka dzose dzinonetsa uye chinyavada, muzita raJesu.
29. Ini ndinogashira shangu dzesimbi uye ndotsika pamusoro penyoka nezvinyavada, muzita raJesu.
30. Iwe matambudziko akasindimara, ndinotsika nyoka dzako nezvinyavada, muzita raJesu.
31. Wese-mweya wenyoka, wakakumikidzwa kundirwisa, unomhanyira kugwenga uye unovigwa mujecha rinopisa, muzita raJesu.
32. Ini ndinopwanya musoro wehurombo-nyoka pamadziro emoto, muzita raJesu.
33. Ini ndinotsika pamusoro penyoka imwe neimwe uye chinyavada, kutarisa kufambira mberi kwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
34. Ndakakanda nyoka dzese dzekushaiwa simba mumoto wekutonga, muzita raJesu.
35. Ini ndakazvitema ndakasununguka pamaoko enjoka nezvinyavada, muzita raJesu.
36. Ini ndinobvisa chikamu cheshe kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
37. Yese mweya wenyoka, zorora ubve pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
38. Iwe Nyoka yaIshe ,imedza nyoka yaFarao wangu, muzita raJesu.
39. Iwe nyoka yaIshe, ruma muvengi wese akavanzika ehupenyu hwangu, muzita raJesu.
40. Yese yegwenzi uye mweya yenyoka, ndinokuuraya nehuku raIshe, muzita raJesu.
41.Mweya Mutsvene moto, urayai nyoka dzese nechinyava chakatarisana neIsrael yangu, muzita raJesu.
42. Semwana weShumba yaJudha, ndinodzinga zinyoka kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
43. Nyoka yese ne scorpion yeurombo, kufa, muzita raJesu.
44. Uturu hwese hwenyoka nezvinyavada, buda kwandiri, muzita raJesu.
45. Nyoka dzose dzakakombama, ngadziparadzwe, muzita raJesu.
46. ​​Hupenyu hwangu, ramba zvese nyoka nechinyavada, muzita raJesu.
47. O Mwari, simukai mukuye nyoka dzepakutanga kuita madota, muzita raJesu.
48. Iwe inyoka yezvisingagone, nyungudzwa nemoto waMwari waEria, muzita raJesu.
49. Yese-yenyoka yekurota, dzokera kumutumwa, muzita raJesu.
50. Nyoka netsiva imwe neimwe, inoshanda inopesana nekwandiri, pukuta ufe, muzita raJesu.
51. Wese akarota-nyoka, kufa, muzita raJesu.
52. Nyoka yese iri mushe yangu, inofa, muzita raJesu.
53. Iwe Nyoka yaIshe, ruma nyoka imwe neimwe mumhuri yangu, muzita raJesu
54. Nyoka yese iri mushe yangu, inofa, muzita raJesu.
55. Chero chinyavhe mune hwaro hwaro, chinofa, muzita raJesu.
56. Iwe nyoka, tadza kubata simba rangu pamweya, muzita raJesu.
57. Wese wenyoka anoteedzera hutano hwangu, ashungurudzwa uye agadziswe simba, muzita raJesu.
58. Nyoka yega yega yakaramba kundiregedza, Moto Mutsvene moto, zviome, muzita raJesu.
59. Chero zvidhori zveshuwa mumhuri yangu, ndinotyora hukama hwako nemhuri yangu, muzita raJesu.
60. Ini ndinotema kuti hakuna nyoka inodzora hupenyu hwangu, muzita raJesu.
61. Nyoka dzose, dzakabiwa mukati mehupenyu hwangu, dzokera kune watumira iwe, muzita raJesu.
62. Wese anorota-nyoka, dzokera kune watumira iwe, muzita raJesu.
63. Nyoka yega yega, inoshanda mubongozozo rehupenyu hwangu, inofa, muzita raJesu.
64. Iwe Nyoka nechinyavada zverima, wakakumikidzwa kuzorwa neni kukunda, kufa, muzita raJesu.
65. Ini ndinorova nekuparadzira misoro yemweya yenyoka, muzita raJesu.
66. Ini ndinotyora chibvumirano chose pamwe nemweya wepiramidhi, muzita raJesu.
67. Nyoka yese, yakabatana nehupenyu hwangu, yakagochwa nemoto, muzita raJesu.
68. Chose chinokwezva chemweya wenyoka kuhupenyu hwangu, gezwa neropa raJesu.
69. Kubvunzana kwese nemasimba ekushopera hupenyu hwangu, kupera mukuvhiringidzika, mune
70. Simba rega rekushopera, richinyandura mafungire angu, riparadzwe, muzita raJesu.
71. Chero zvirevo zvakashata zvine zita rangu, ngazvipiswe nemoto, muzita raJesu.
72. Aritari yega yenyoka, yakavakirwa pandiri, kupisa kumadota, muzita raJesu.
73. Ini ndinobvisa zita rangu kubva kune yeipi yakaipa rejista uye rekodhi faira, muzita raJesu.
74. Yese kubatana pakati pemweya weiyo python nehupenyu hwangu, putsa kuita zvidimbu, muzita raJesu.
75. Sangano rega, rakaumbwa panzvimbo yangu nemweya wenyoka nemadzitateguru angu / vabereki, raswa neropa raJesu.
76. Ini ndinosunungura kubva pamabatiro enyoka, muzita raJesu.
77. Cheti imwe neimwe yenyoka muhupenyu hwangu, buda, muzita raJesu.
78. Zai rega renyoka mumudziyo wehupenyu hwangu, rinofanira kupwanywa kuita sando yemoto, muzita raJesu.
79. Chero pfuma yenyoka iri yangu, nyangarika uye usadzokazve, muzita raJesu.
80. Yese nzvimbo yekuzorora yenyoka muhupenyu hwangu, gamuchira kupisa kusingaitwe neWemasimbaose, muzita raJesu.
81. Yese yakasimba imba yenyoka muhupenyu hwangu, ngaiparadzwe nemoto waMwari, muzita raJesu.
82. Iwe musoro wenyoka, gurwa-bvarurwa nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
83. Moto waMwari, pinda muhupenyu hwangu upedze vese vatorwa ipapo, muzita raJesu.
84. Hushe hupi nohupi hwehupombwe muhupenyu hwangu, vafe mitezo, muzita raJesu.
85. Chese chiitiko chekunyengedzera mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, ngaafe mitezo, muzita raJesu.
86. Chirongwa chose chisingaonekwe chenyoka muhupenyu hwangu, ngatiparadzwe, muzita raJesu.
87. Yese yemadzitateguru eatari yemweya yenyoka mumhuri yangu, tsva kusvika kumadota, muzita raJesu.
88. Wese munhu asingapfidze anonamata nyoka mumhuri yangu, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.
89. Ugaro hwese hwemasimba enyoka mu (zita musha wako rwizi), ripiswe nemoto, muzita raJesu.
90.Mweya Wakachena, zadza vhurume remweya wenyoka muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
Tenda Mwari, nemhinduro kuminamato yako.
Previous nyayaMinamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 1
inoteveraMinyengetero Yesimba Resimba Kupesana neRima Masimba
Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 10th 2018
Kununurwa minamato Kubva kuNzvimbo YeGungwa Dzvuku
30 Minamato yeminamato yekubatsira kubva kumusoro
Minamato yekupokana nekuzviona wega akafa muhope